The kacha ejiji kpara ụkpụrụ ịkwanyere n'ala-News-Topflor China ejedebeghị
Echiche:8 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-06-01 Mmalite: Saịtị
Ihe ọhụrụ PVC na gburugburu ebe obibi na-acha gburugburu ebe obibi nwere ihe ndị dị ka PVC na eriri kemịkal dị ike. Ọ na-akpa n'ime a atọ akụkụ nka ka nye ohere ka a pụrụ iche amara. Colorsdị dị iche iche na eserese dị iche iche na-eweta ngosipụta dị oke mma, na-emesi ejiji na ewu ewu ike. Ọ ga-eji na ala, mgbidi, n'elu elu, free Nchikota na splicing, izute kere si kere si ahaziri kere imewe.
PVC kpara kapeeti nwere udidi na e ji mara nke textiles na ndị bara uru uru nke PVC. Ọ dị mfe ilekọta na inogide. Dị iche na ụlọ PVC zuru oke, ụdị akwa ya pụrụ iche nwere mmetụta akụkụ atọ. Site na njupụta nke ìhè, ọ na-egosi ọhụụ pụrụ iche ọhụụ atọ.
PVC kpara kapeeti anaghị ebu formaldehyde na redioaktivu bekee, nke bụ ike, mma na environmentally friendly. N'ihi na ala nke polyurethane na-eme ka gburugburu ebe obibi dị elu, ọ dị mma ịga ije na anaghị egosipụta mkpọtụ. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị elu, ụlọ nkwari akụ na ebe ndị ọzọ nwere nnukwu ihe.
High-ọkwa PVC kpara kapeeti nwere uru nke elu ike na abrasion eguzogide, na-abụghị ileghara, corrosion eguzogide, mmiri na-eguzogide, mmanụ na-eguzogide, na ndị na-abụghị toxicity. Elu dị larịị ma nwee ezigbo adsorption na nguzogide ujo dị mma. Ọ bụghị naanị na ọ nwere njirimara nke ịdị jụụ ma dị mfe ihicha ala osisi, kamakwa ọ nwere mmetụta ụkwụ dị nro na mmetụta dị jụụ nke kapeeti ajị anụ, ya mere a na-ejikarị ya. Ọ nwere ogologo ndụ ọrụ ma dị mfe iburu n'oge iwu. Ọ dịghị achọ iwu ụlọ ọrụ mgbe a na-etinye ya. Ihe mkpuchi ụfụfụ PVC dị na ala nke kapeeti nwere ume siri ike na ngwongwo ngwongwo, nke nwere ike ịmịkọrọ mmetụta siri ike ma gbochie ihu ahụ imebi emebi.
Ihe mkpuchi PVC nwere ụdị dị iche iche. Elu nwere usoro nke grid, ụdị akwa dị iche iche, agba dị iche iche na usoro, na agba ndị dị nro, na-adịgide adịgide, ma nwee mmetụta akụkụ atọ. Enwere nkọwa dị iche iche nke kapeeti PVC a kpara akpa, ma blọk ma na-apụta, iji zute ọrụ dị iche iche chọrọ.